Trans fra - inona izany? Raha misy ny fatin'ny Trans Fat - Lisitry ny vokatra
Красота / From Poster
Ny tavy Trans dia carcinogens izay misy menaka legioma rehefa haverina. Ny ankamaroan'ny firenena eto amin'ity tontolo ity dia mifehy ny votoatin'ny fatran'ny trans ao anaty sakafo - izy ireo dia tokony hihoatra ny 2% amin'ny fitambaran'ny tavy ao amin'ny vokatra. Ny voka-dratsin'ny fatran'ny trans dia misy fiantraikany ratsy amin'ny metabolism - amin'ny farany, dia mitarika ny aretim-po izy ireo ary miharatsy ny fihenan'ny zaza. Amin'ny inona …
Trans fra - inona izany? Raha misy ny fatin'ny Trans Fat - Lisitry ny vokatra Read full »
Fanatanjahan-tena amin'ny bokotra - Fandaharan'asa fanatanjahan-tena mahomby
Ny fiofanana momba ny fotoam-bidy mahitsy sy mahomby ao an-trano dia midika fa ny fahaizana mametsika ny hozatra amin'ny asa rehefa manao fanazaran-tena. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny mampitombo fahatsapana fifandanjalanjana ary fahatsapana ny asa mitambatra manerana ny hozatry ny tongotra sy ny vatana. Ny anjara asan'ny fampiofanana sy ny fampiofanana tsy tapaka. Ny fomba fiaina mandentika tsy vitan'ny hoe mahatonga ny ozitsa sy marefo fa mitondra ihany koa ...
Fanatanjahan-tena amin'ny bokotra - Fandaharan'asa fanatanjahan-tena mahomby Read full »
Tavy amin'ny lafiny - ahoana ny fomba hialana? Ny fanazaran-tena tsara indrindra hanesorana ny sisiny
Ny tavy subcutanus malefaka amin'ny lafiny no fahavalon'ny tarehimarika iray ary vokatry ny fomba fiaina. Izany no mahatonga ny manala tavy avy amin'ny ilany amin'ny fanazaran-tena tsy tapaka - na ny kardinaly sy ny fampiharana an-trano mba hanamafisana ny hozatra kibo. Ny tena zava-dehibe amin'ny ady amin'ny tavy amin'ny andaniny dia ny fivoaran'ny hozatry ny gluteal - ny fampitana ny fika tsy manamafy fotsiny ny salanisa ...
Tavy amin'ny lafiny - ahoana ny fomba hialana? Ny fanazaran-tena tsara indrindra hanesorana ny sisiny Read full »
🍠Batat - inona izany? Voankazo mamy - tombony sy fahavoazana
Zavamaniry mamy dia zavamaniry liana maharitra, havana lavitra amin'ny ovy mahazatra. Koa satria misy ny siramamy mamy sy karbôra kely tsotra, dia manana tsiro mamy izy - izany no antony iantsoana azy hoe "ovy voatoto". Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ny mamy sy ny ovy fotsy dia ny sorony sy ny tsirony - mihintsana izy mandritra ny fandrahoan-tsakafo, ary mitahiry karaoty amin'ny tsirony. Ao amin'ny ...
🍠Batat - inona izany? Voankazo mamy - tombony sy fahavoazana Read full »
Sakafo any Mediterane - ny fotokevitra sy ny menus amin'ny famoizana lanja isan'andro
Sakafo any Mediterane no fomba hanina mety. Ny tena zava-dehibe ao amin'ny sakafo dia ny fanoloana ny tavy biby miaraka amin'ny tavy legioma, ary koa ny fanjonoana trondro sy hazan-dranomasina isan'andro - loharanon'ny yodo ary omega-3. Ny fikarohana dia nanolo-kevitra fa manampy hanatsara ny metabolism. Ny sakafony dia miankina amin'ny fampiasana legioma vaovao sy ny ahitra manitra - miaraka amin'ny antonony ...
Sakafo any Mediterane - ny fotokevitra sy ny menus amin'ny famoizana lanja isan'andro Read full »
Fandehanana: Fahasoavana ara-pahasalamana
fahasalamana / From Poster
Fandehanana dia toe-javatra voajanahary sy mahazatra amin'ny ankizy amin'ny taona rehetra. Rehefa dinihina tokoa, ity dia ampahany tsy miankina amin'ny lalao ivelany, ary tokoa fa ny fiainana andavan'andro olona kely. Mba hitarihana ny hetsik'ireo ankizy amin'ny fivoarana ara-batana mahasalama ara-batana, mba hamongorana ireo fotoana ratsy ho an'ny fahasalamana, mila fantatrao ny tombontsoa azo avy amin'ny jogging amin'ny fahatanorana ary ny fiantraikan'ny fihazakazahana ...
Fandehanana: Fahasoavana ara-pahasalamana Read full »
Sakafo misy sakafo karbônina dia sakafo. Lisitry ny vokatra afaka misy otrikaina
Ny sakafom-pisotro misy gliosida dia iray amin'ny sakafo mahomby indrindra amin'ny fihenan'ny lanja sy ny fitazonana lanja azo antoka. Raha mandà tsy mihinana sakafo misy karbônina ianao dia miditra amin'ny fitondrana ketone, ny vatana dia manomboka mampiasa tahiry azo tavy azo alaina ho loharanom-angovo. Araka ny hevitrao, ny sakafo tsy misy karbôgria dia mitarika haingam-pandeha haingana tsy miady amin'ny hanoanana. Na izany aza, ilaina ny mahatadidy fa ...
Sakafo misy sakafo karbônina dia sakafo. Lisitry ny vokatra afaka misy otrikaina Read full »
1 2 ... 347 manaraka →
Copyright © 2020 MamaClub | Powered by WordPress Theme Astra